New Zealand Cricket na -akagbu njem Pakistan na mberede maka nsogbu nchekwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Egwuregwu » New Zealand Cricket na -akagbu njem Pakistan na mberede maka nsogbu nchekwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Akụkọ na -agbasa ozi Pakistan • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Egwuregwu • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Kọmitii Cricket Pakistan (PCB) kwuru na NZC kagburu njegharị ahụ "n'otu n'otu" n'agbanyeghị "nhazi nchekwa nzuzu" emere maka usoro a, nke ga -enwe egwuregwu otu ụbọchị mba ụwa atọ na Rawalpindi na T20 ise na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Lahore.
A kwụsịrị njem a nkeji ole na ole tupu egwuregwu mbụ ndị otu New Zealand na Pakistan n'ime afọ iri na asatọ.
Bọọdụ krịket nke Pakistan na New Zealand kwuru na akagbuola egwuregwu Rawalpindi n'ihi nche nche.
Prime Minista Pakistan Imran Khan agwala onye otu New Zealand Jacinda Ardern okwu na Fraịde iji mesie ya obi ike maka nchekwa otu ahụ.
Ndị otu New Zealand ga -ebuso Pakistan agha n'egwuregwu mbụ ha na ala Pakistan afọ iri na asatọ n'obodo Rawalpindi taa, mana akagbuola njem ahụ tupu mmalite egwuregwu mbụ, n'ihi 'nchegbu nchekwa' akọwapụtaghị.
Egwuregwu Rawalpindi Cricket
Cricket New Zealand (NZC) - bọọdụ mba egwuregwu ahụ - wepụtara nkwupụta na -atụghị anya na -ekwu na ọ “na -agbahapụ” njem ahụ n'ihi nchedo gọọmentị dị nkeji ole na ole tupu mmalite egwuregwu amalite.
“N'ịgbasawanye na ọkwa iyi egwu gọọmentị New Zealand maka Pakistan, na ndụmọdụ sitere n'aka ndị ndụmọdụ nchekwa nchekwa NZC na ala, ekpebiela na Black Caps agaghị aga n'ihu na njem a, ”nkwupụta New Cricket nke New Zealand kwuru.
Nkwupụta PCB kwuru, "PCB dị njikere ịga n'ihu egwuregwu a haziri ahazi." "Agbanyeghị, ndị hụrụ egwuregwu cricket nọ na Pakistan na gburugburu ụwa ga -emechu ihu na mwepụ ikpeazụ a."
Ka ọ dị ugbu a, onye ozi mgbasa ozi Pakistan kwuru na Prime Minista Pakistan Imran Khan agwala onye otu New Zealand Jacinda Ardern okwu na Fraịde iji mesie ya obi ike maka nchekwa otu ahụ.
"N'oge na -adịghị anya gara aga, Prime Minista Imran Khan nọ na Prime Minista New Zealand wee mesie ya obi ike na a na -enye ndị otu New Zealand nchekwa na -enweghị isi na Pakistan, PCB ekwuola na ndị otu nchekwa New Zealand egosipụtala afọ ojuju ha. nhazi nchekwa nke Pakistan, "onye ozi mgbasa ozi Fawad Chaudhry kwuru.
"Ụlọ ọrụ ọgụgụ isi anyị so na sistemụ ọgụgụ isi kacha mma n'ụwa na dịka ha si kwuo, ndị otu New Zealand anaghị enwe ụdị ihe iyi egwu ọ bụla."
Na nkwupụta, Onye isi Cricket New Zealand David White kwuru na ọ gaghị ekwe omume ịga n'ihu na njem ahụ nyere ndụmọdụ nchekwa enyere ya.
NZC kwukwara na a na -eme nhazi ka ndị otu egwuregwu cricket ndị nwoke New Zealand pụọ Pakistan.
A ga -ahụ mmegharị a dị ka ihe otiti na mbọ ndị Pakistan Cricket Board na -eme ka cricket mba ụwa zuru oke na ndị otu niile laghachi Pakistan, mgbe a manyere ndị otu obodo ka ha jee biri na mba ọzọ afọ isii mgbe mwakpo 2008 wakporo ndị otu egwuregwu Sri Lanka na Sri Lanka. Lahore.
Ajụjụ ka dị ugbu a ma ndị otu egwuregwu cricket ụmụ nwoke England ga -aga n'ihu na atụmatụ maka njem ya na Pakistan n'ọnwa na -abịa.